Essien: Ghana way gaadhi kartaa semi-final-ka Koobka Aduunka
HomeAfricaEssien: Ghana way gaadhi kartaa semi-final-ka Koobka Aduunka
Xidiga khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Ghana ee Michael Essien ayaa rumaysan in xidigaha loo soo xulay wadankiisa sanadkani ay yihiin kuwo awood u leh inay gaadhaan Semi finalka iyo waliba heerarka ka dambeeyaba tartanka koobka aduunka.
Ghana, oo noqotay xulkii saddexaad ee ka socda qaarada Afrika ee gaadha Rubuc dhamaadka koobka aduunka sanadkii 2010, ayaa ku dhex jirta group lagu ururiyey qaramada USA, Portugal iyo Germany kaas oo u muuqda mid sida looga gudbaa ay aad u adag tahay.
Essien ayaa kamid ah laacibiinta uu soo xushay tababare Kwesi Appiah inay qaranka Galbeedka Afrika u metelaan koobka aduunka sanadkan ka dhacaya wadanka Brazil kadib markii uu dhaawac kaga hadhay koob aduunkii 2010, waxaanu ku adkaysanayaa in xulka lagu naanayso xidigaha madow ay yihiin kuwo si fiican uga soo bixi kara inay magic u horseedaan qaarada Afrika sanadkan.
“Xulka sanadkan aanu wadanaa waa xulkii ugu fiicnaa ee Ghana la shir timaado, tayadooduna shaki la’aan waa mid saraysa, khaas ahaan qaybta khadka dhexe , waxaanu haysanaa rag badan oo aan kala xulan karno boos kastana ku soo baxaya, taas oo ah waxa aanu xul kasta dheer nahay.”
‘’Ujeedadayada koowaad waxay tahay , sidii aanu uga soo bixi lahayn wareega Guruubyada, intaa kadibna ciyaarba ta ka dambeysa aanu ugu xisaabtami lahayn, yaa og ? waxaanu dhab ahaan nahay kuwo ku haboon inay meel fiican gaadhi karaan, oo u bixi kara Semi finalka iyo xataa Finalkaba, wax kastaa wey dhici karaan, laakiin waxaanu nahay kuwo si aad ah ugu dhegan inay kor uga sii socdaan, halkay ka bilaabeen,’ Ayuu Essein ku yidhi waraysi uu siiyey shabakada FIFA.COM.
‘Marka koowaad waxan ku dedaalaynaa inaan wareega labaad u gudubno, wixii ka dambeeyana waanu eegi doonaa halkaanu gaadhi karno.”
Rajo Xumada Afrika: Tababarihii Nigeria Ee La Eryey Oo Dib Loo Magacaabay
Ronaldihii Brazil ayaa Dunida Ugu Fiicnaa: Benzema
Snoop Dogg : Dempsey Waa Laacibka Kubada Cagta Aduunka
Fanaanka Maraykanka ah ee Snoop Dogg ayaa ku sifeeyey ciyaaryahanka xulka qaranka United States ee Clint Dempsey inuu yahay “Ciyaaryahanka kubada cagta ee kaalinta No.1 aduunka ugu sita”.